I-DA- BW19002 cast iron cookware 2020 ethengisa kakhulu
Amapani othosi wendabuko angapheka ngokungalingani, imvamisa okuholela enyameni okunzima kakhulu ukuyidla. Kusha futhi kuthuthukisiwe! Amabhiningi ahlanganayo ahlukaniselwa ukushisa okusheshayo nokuhlanzwa okulula. Sakaza umehluko wensimbi ne-skillet yakho entsha esabalalisa ukushisa ngokulinganayo ekuphekeni okuphekiwe, inyama ethe xaxa.
ithatha isikhala esincane kakhulu kunensimbi kagesi.
I-DA-BW24002 cast iron cookware 2020 ukudayiswa okushisayo okwenziwe eChina
I-DA-BW32001 yensimbi yokupheka i-DISA
I-DA-BW18001 yensimbi yensimbi engu-2020 ethengisa kakhulu